Ukuloba Kulo lonwabo kubo bonke
Nangona "ukuloba" kunokubonakala ngathi iyigama elingafunanga nkcazo, malunga nabantu abayizigidi ezingama-38 ababandakanyeka kulo msebenzi - ininzi yabo yintlanzi kunokuba abadobi beentengiso-mhlawumbi kukho ukubaluleka kokujonga ukuba kuthetha ukuthini.
"Ukuloba" kunokuchazwa ngokusemthethweni njengendlela yokubamba iintlanzi zasendle okanye ezinye iintlobo zasemanzini emanzini, mhlawumbi ngenxa yokutya, njengoshishino okanye kwimidlalo.
Ukuloba ngentengiso kubamba iintlanzi ezithengiswayo, ngelixa ukuloba ngokuzonwabisa kuyimisebenzi yabathandi bezemidlalo, kwaye ingaba yinjongo yokudla okanye imidlalo yokubamba, okanye zombini. Ngezinye iinkcazo, ezinye iintlobo zasemanzini, ezifana ne-mollusks kunye ne-crustaceans zibhekwa ukuba zibanjwe "ukuloba" kubo, kodwa ngokuqhelekileyo igama alibandakanyi iintlanzi zokuvuna kwiifama zentlanzi ezithengiswayo. Akunakubandakanya izilwanyana zaselwandle, ezinjengamahaha okanye ihlengethwa.
Ubu bungqina bubonisa ukuba abantu baqala ukubamba ukususela kwiminyaka engama-40 000 edlulileyo. Olunye ubungqina bemivubukulo lubonisa iinqabana zengqungquthela, amathambo eentlanzi ezilahlayo kunye nomzobo wokuqhafaza obonisa ukuba ukutya okuselwandle kwakuyimpawu ebalulekileyo yokudla komntu wokuqala.
Uloba lokuzonwabisa luyakwenziwa ngeendlela ezahlukeneyo, kubandakanywa ukuqokelela ngesandla, ukukhwaza, ukuxuba, ukuxuba nokukhwaza - inkqubo yokubamba iintlanzi kunye neentambo, imigca kunye neentonga okanye izibonda.
Nangona kunjalo, abaninzi abantu baqwalasela ukuloba ukuba kuthathwe isenzo sokuthatha intlanzi nge-hook kunye nomgca. Ungasebenzisa i-pole okanye intonga kunye ne-reel ukwenza njalo. Izindonga kunye nee-reels zokuloba ziquka iintambo zokuloba iintambo, ukufakela iimpahla zokuloba, ukufakela iimpahla zokuloba kunye neengubo zokulahla. Ezinye iifom zokubamba iintlanzi, ezifana nokukhwela okanye ukuxhuma, ukuhluka ngohlobo kwaye ezinye iindlela zingavunyelwe ngumthetho.
Akunakucaca ukuba indlela yokuzonwabisa yokuzonwabisa eyayiqala ngayo, kodwa okokuqala isicatshulwa saseNgilandi ekulobeni lokuzonwabisa kwanyatheliswa ngowe-1496, kwaye yaquka ulwazi oluninzi malunga nokukhetha amanzi okuloba, ukwakhiwa kwamatye kunye nemigca, kunye nokusetyenziswa kwezinto zokuhamba kunye nezinto zokufakelwa Izimpukane - zifana neendlela ezikhoyo zokuloba ngokuzonwabisa.
Ngoluvo oluthile, ukuloba okwenene lokuzonwabisa kwakungeniswa kwiminyaka yamandulo emva kwemfazwe yenkcubeko yesiNgesi kunye nokupapashwa kwencwadi ethi Compleat Angler ngu-Izaak Walton ngo-1653 - ukunyaniseka kwenyaniso yokuloba ngokuzonwabisa.
Namhlanje, ukuloba kudla ngokugqithiselwa kumanzi okuloba kunye noloba.
I-Tournament yokuloba ibamba iintlanzi. Imithetho iyahluka, kodwa i-tournament yokuloba ithandwa kakhulu kwaye ibandakanya imali eninzi yemali. Kukho iintambo ze-catfish, iintambo ze-walleye kunye nezinye iindidi zeetournaments kumanzi amanzi kunye netyuwa.
Abantu abaninzi baqala ukuloba beselula kwaye bathabathe ubomi babo bonke. Abalobi abesifazana ngoku banentlanzi kuwo onke amanqanaba kwaye banokukhuphisana nakwizinga lobuchule kwiindawo zokuloba. Ukuloba akukhawulelwanga ngesondo okanye iminyaka - nabani na onokuyintlanzi, okwenza ibe yintando yesininzi kuyo yonke imidlalo yokuzonwabisa.
Ngaba Utywala I-Charcoal Toxic or Harmful?
Indlela Ulayini oLungileyo oLawula ngayo kwi-Art
Indlela i-Saponification yenza ngayo isepha